PressReader - Ilanga: 2018-02-08 - BAKHISHWE SEBEFUNDISA EZIKOLENI
BAKHISHWE SEBEFUNDISA EZIKOLENI
Ilanga - 2018-02-08 - Izindaba - MTHOBISI SITHOLE mthobisis@ilanganews.co.za
BAKHIHLA isililo othisha abaphothule iziqu zobuthishela ezikhungweni ezahlukene, abathi bakhishwe ezikoleni sebefundisa emasontweni amabili edlule kwathunyelwa ozakwabo abebefunda ngomfundaze, iFunza Lushaka ezikhaleni zabo.
Bakhala ngokuthi okwenzekayo kakunabo ubulungiswa ngoba bonke baneziqu ezifanayo. UMnu Dion Ross weTeachers Liberation Project, uthi bamatasa bahlela ukhukhulelangoqo wemashi. Uthi okubahlukumezayo wukuthi othisha kabaphathwa ngendlela efanayo KwaZulu-Natal, njengoba nothishanhloko sebanikezwa umyalelo wokuthi kakumele baqashe, sekumele balinde uthisha ozothunyelwa umnyango ngoba efundiswe yilo mfundaze.
“Ngesikhathi sisafunda, besiqhoshelwa ngokuthi kunamathuba emisebenzi asilindile kodwa lokho kakusenzeki.
"Sesikhathele yile nto yokuthi thina esifunde ngeNational Student Financial Aid Scheme (Nsfas) sibekwe lena ekugcineni uma sekuqashwa.
"Nathi sinezikweletu, kumele sikhokhele uhulumeni imali yawo kanti nabazali abebefundisa izingane ngemali yabo, babheke ukuba zithole umsebenzi izingane,” kusho uMnu Ross.
Inhloko yoMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uDkt Enoch Nzama, ike yatshela ILANGA ngesonto eledlule ukuthi umnyango udilize othisha abebengenazo izicucu ezifanele.
“Othisha esibakhiphile yilaba obesekuneminyaka behleli ethala ( system) befundisa kodwa bengenawo amaphepha afanele. Besibanikezile ithuba kusenesikhathi sathi mabafunde kodwa kwaba khona abazithela ngabandayo.
"Baningi abebefundela ubuthishela abahleli emakhaya okumele sibaqashe kulezi zikhala,” kusho uDkt Nzama.
IFunza Lushaka wumfundaze oxhasa abafundi abazimisele ngokufundisa ezikoleni zasemakhaya iminyaka eyisihlanu uma sebephothule iziqu zabo.
Umnyango wezemfundo uyabafunela umsebenzi ezikoleni kanti abebengafundi ngawo bayazifunela futhi kabavunyelwe othishanhloko ukuqasha ezikoleni zabo uma bengakathunyelwa wumnyango bonke abafunde ngalolu xhaso.
ISekela-mengameli leNational Teachers' Union (Natu), uMnu Allen Thompson, lithi abakukhuthazi lokhu okwenziwa wumnyango wezemfundo ngoba wakhela othisha beFunza Lushaka isigcwagcwa ezikoleni.
Uthi beyiNatu kabalibukeli phansi ilungelo lokuqashwa kwabo kodwa okwenziwayo makufane kubo bonke othisha. “Umnyango mawuyeke ukwenza sengathi laba beFunza Lushaka baneziqu ezehlukile kwabanye. Umfundaze kakusiwona ongena ekilasini, kodwa wuthando nekhono lomuntu oluphasisa abantwana.
"Sinazo izikhalo eziningi ezifana nalezi lapho kukhishwe khona othisha emakilasini kade bezabalaza bezifunela umsebenzi kothishanhloko emuva kokuba befunde kanzima ngemali emanyuvesi baphothula kodwa kwalethwa abafundiswe yiFunza Lushaka ekubeni bona bebezihlalele emakhaya bengakaze bakujulukele ukufuna umsebenzi,” kusho uMnu Thompson.
Uthi isikole sinamandla okuziqashela uthisha esimfunayo. Uveze nokuthi lolu daba lothisha beFunza Lushaka selususe omkhulu umsindo ngoba isigungu saseWestville Boys High School, eThekwini besinqaba ukuthatha othisha beFunza Lushaka saze saludlulisela enkantolo udaba.
UNobhala weSouth African Democratic Teachers' Union (Saadtu), uNkz Nomarashiya Caluza, uthunyelelwe umqhafazo wathi uzophendula nakuba egcine engaphendulanga njengoba eveze ukuthi akekho eNingizimu Afrika.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthi kubekwa eqhulwini othisha abafundiswe ngeFunza Lushaka ngoba lo mfundaze ngowomnyango.
"Kasikwazi ukuthi singakhipha imali sifundise othisha bethu bese singabeki bona phambili ohlelweni lokuqashwa. Kayikho into abazoyisho othisha abakhonondayo bese sishintsha indlela esisebenza ngayo emnyangweni ngoba sisebenza ngobulungiswa.
"Vele ngeke ubanelise bonke abantu, uma kuqashwe omunye lowo uthi yena umnyango uyasebenza kodwa uma kuqashwa abanye kuyagxekwa.
"Othisha beFunza Lushaka bafundiswe yithina ngoba sinenhloso ngabo,” kusho uMnu Mthethwa.